1 Samueri 23 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Samueri 23:1-29
23 Kwapera nguva yakati, vakauya kuzoudza Dhavhidhi, vachiti: “Tarira vaFiristiya vari kurwa neKeira,+ uye vari kupamba mapuriro.”+ 2 Dhavhidhi akabvunza+ Jehovha, achiti: “Ndiende here, uye ndiuraye vaFiristiya ava here?” Jehovha akatiwo kuna Dhavhidhi: “Enda, uraya vaFiristiya vacho, uponese Keira.” 3 Varume vaDhavhidhi vakati kwaari: “Tarirai! Tiri kutya tichiri muno muJudha,+ zvino zvakadini kana tikaenda kuKeira kunorwisa mauto evaFiristiya!”+ 4 Naizvozvo Dhavhidhi akabvunzazve Jehovha.+ Jehovha akamupindura akati: “Simuka, enda kuKeira, nokuti ndichaisa vaFiristiya muruoko rwako.”+ 5 Naizvozvo Dhavhidhi akaenda nevarume vake kuKeira, akarwa nevaFiristiya, akaenda nezvipfuwo zvavo, asi akauraya vakawanda kwazvo; uye Dhavhidhi akava muponesi wevagari vokuKeira.+ 6 Zvino Abhiyatari+ mwanakomana waAhimereki paakatizira kuna Dhavhidhi kuKeira, akaenda aine efodhi+ muruoko rwake. 7 Kwapera nguva yakati, Sauro akaudzwa kuti: “Dhavhidhi asvika kuKeira.”+ Sauro akatanga kuti: “Mwari amutengesera muruoko rwangu,+ nokuti azvipfigira nokupinda muguta rine masuo nomuzariro.” 8 Naizvozvo Sauro akashevedza vanhu vose kuti vaende kuhondo, kuti vaende kuKeira, kunokomba Dhavhidhi nevarume vake. 9 Dhavhidhi akaziva kuti Sauro akanga achironga kumukuvadza.+ Nokudaro akati kumupristi Abhiyatari: “Uya neefodhi pedyo.”+ 10 Dhavhidhi akati: “Haiwa Jehovha Mwari waIsraeri,+ chokwadi mushumiri wenyu anzwa kuti Sauro ari kuda kuuya kuKeira kuzoparadza guta nokuda kwangu.+ 11 Varidzi venyika yeKeira vachandiisa muruoko rwake here? Sauro achauya sokunzwa kwaita mushumiri wenyu here? Haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, ndapota udzai mushumiri wenyu.” Jehovha akati: “Achauya.”+ 12 Dhavhidhi akati: “Varidzi venyika yeKeira vachandiisa ini nevarume vangu muruoko rwaSauro here?” Jehovha akatiwo: “Vachakuisa.”+ 13 Dhavhidhi akabva asimuka nevarume vake, varume vanenge mazana matanhatu,+ vakabuda muKeira, vakaramba vachifamba-famba kwose kwose kwavaigona kufamba-famba. Sauro akaudzwa kuti Dhavhidhi akanga atiza muKeira, naizvozvo akarega kubuda. 14 Dhavhidhi akagara murenje munzvimbo dzakaoma kusvika, akaramba achigara munzvimbo ine makomo murenje reZifi.+ Sauro akaramba achimutsvaka nguva dzose,+ asi Mwari haana kumuisa muruoko rwake.+ 15 Dhavhidhi akaramba achitya nokuti Sauro akanga abuda kuzotsvaka mweya wake, Dhavhidhi paakanga ari murenje reZifi kuHoreshi.+ 16 Zvino Jonatani mwanakomana waSauro akasimuka, akaenda kwaiva naDhavhidhi kuHoreshi, kuti asimbise+ ruoko rwake pamusoro paMwari.+ 17 Iye akati kwaari: “Usatya;+ nokuti ruoko rwababa vangu Sauro haruzokuwani, iwe uchava mambo+ waIsraeri, ini ndichava wechipiri kwauri; uye baba vangu Sauro vanozviziva izvozvo.”+ 18 Vaviri vacho vakabva vaita sungano+ pamberi paJehovha; Dhavhidhi akaramba achigara muHoreshi, uye Jonatani akaenda kumba kwake. 19 Gare gare varume vokuZifi+ vakaenda kuna Sauro kuGibhiya,+ vachiti: “Dhavhidhi haasi kuvanda+ pedyo nesu munzvimbo dzinonetsa kusvika kuHoreshi+ here, pachikomo cheHakira,+ chiri kurudyi rweJeshimoni?+ 20 Haiwa mambo, mweya wenyu zvaunopanga+ kuuya, uyai, uye isu tichamuisa muruoko rwamambo.”+ 21 Sauro akati: “Makakomborerwa naJehovha,+ nokuti mandinzwira tsitsi. 22 Ndapota, ani naani akamuona ikoko ngaaende, arambe ari ikoko aone nzvimbo yaanogara achisvika, nokuti ndakaudzwa kuti iye ari kuchenjerera.+ 23 Onai muzive nzvimbo dzose dzaanovanda; mudzoke kwandiri nouchapupu, uye ndichaenda nemi; kana ari munyika, ndichanyatsomutsvakawo pakati pezviuru+ zvose zvaJudha.” 24 Naizvozvo vakasimuka vakaenda kuZifi+ vari mberi kwaSauro, Dhavhidhi nevarume vake pavakanga vari murenje rokuMaoni+ muArabha+ kumaodzanyemba kweJeshimoni. 25 Gare gare Sauro akauya nevarume vake kuzomutsvaka.+ Pavakaudza Dhavhidhi, akabva aenda kuibwe,+ akaramba achigara murenje rokuMaoni. Sauro paakazvinzwa, akatevera+ Dhavhidhi kusvikira kurenje rokuMaoni. 26 Sauro akazosvika kurutivi rwuno rwegomo, Dhavhidhi nevarume vake vari kurutivi urwo rwegomo. Naizvozvo Dhavhidhi akakurumidza kuti atize+ Sauro; uye nguva yose iyi Sauro nevarume vake vakanga vachikomba Dhavhidhi nevarume vake kuti vavabate.+ 27 Asi paiva nenhume yakauya kuna Sauro, ichiti: “Chimbidzai muende, nokuti vaFiristiya vari kurwisa nyika!” 28 Sauro akabva arega kutevera Dhavhidhi,+ akaenda kunosangana nevaFiristiya. Ndokusaka vakatumidza nzvimbo iyoyo kuti Ibwe roKuparadzana. 29 Dhavhidhi akabva ipapo, akatanga kugara munzvimbo dzakaoma kusvika kuEni-gedhi.+
1 Samueri 23